10 Laanta Milatariga ee ugu Mushaarka Badan 2022 | Shaqooyinka Goobaha Wealth
Bogga ugu weyn 10 Laanta Milatariga ee ugu Mushaarka Badan 2022
Isha sawirka: www.quora.com
Adduunyadu si xawli ah ayay isu beddelaysaa, ma jirto meel ka cad marka loo eego u shaqaynta ciidanka. Mar haddii loo tixgeliyey mihnad mushahar oo liidata, sannadihii u dambeeyay sheeko noocan oo kale ah aad bay isu beddeshay.
Isbeddelkan mushaharka iyo faa'iidooyinka kordhay ayaa si gaar ah run ugu ah laamaha badan ee milatariga adduunka oo dhan. Haa, waxaa jira liisaska qaar ka mid ah liiskan oo ka socda milatariga Mareykanka, laakiin tobanka ugu sarreeya waxay ka kooban yihiin laamo aan la filayn oo ka kala yimid adduunka oo dhan, laga bilaabo awood iyo sharaf ilaa wax yar iyo lama filaan.
Haddii aad tahay ruug -caddaa, si firfircoon u adeegeysa ama aad tahay shaqaaleeye, ma u malaynaysaa in laanta adeeggaagu goysay? Haddii aad leedahay dan aan dhammaanayn oo ah inaad ku biirto militariga laakiin aad rabto inaad hesho waxa aad mudan tahay, waa kuwan 10 -ka laamood ee ugu mushaharka badan adduunka.
10) Ciidanka Cirka ee Boqortooyada (UK)
Mid ka mid ah laamaha ugu qiimaha badan ee adeegga milatariga adduunka ayaa sidoo kale bixiya si loo waafajiyo sumcadda.
Shahaadooyinka adiga kugu soo biiraya si aysan u fududaan, laakiin haddii aad jabin karto jaangooyada, waxaad ka heli kartaa adiga oo helaya ku dhawaad ​​28,000 $ oo ah mushaharka aasaasiga ah ee Mareykanka oo aan ahayn inaad naftaada ka dhex hesho khataraha laga helo xagga hore khadadka.
Waxa kale oo aad lahaan doontaa sharaf gaar ah oo ah inaad ka mid noqoto taariikhda qurxinta ee RAF labadaba gudaha Ingiriiska iyo caalamkaba.
Kani waa Laanta Militariga ee ugu Mushaharka Badan ee ku jirta liiskan.
Akhri: 10 -ka Lacag ee Ugu Lacagta Badan Maraykanka | Dalalka Ugu Fiican Sanadka 2022
9) Ciidamada Is-difaaca Japan-
In kasta oo mushaharka saldhiggu aanu ku jirin meesha ugu saraysa liiska, isku-aadka lambarkaaga koowaad waa lacag-bixin wadareed ah oo ka timaadda hawlgabnimada Ciidanka Is-difaaca Japan.
Haa, waxaa lagaa canshuurayaa bixinta, laakiin sanado badan oo adeeg ah, yaa aan doonayn isbeddel yar oo inta badan soo gala in ka badan $ 100,000 US?
Haddii aad rabto in yar oo baarashuud hawlgab ah sannadihii aad shaqaysay- markaa waa inaad mar hore eegtaa waxaad samayn karto ku biir JSDF.
8) Maraykanka Marine Corp-
Haa, mushaharka saldhiga haddii aad ku biirto USMC waxay la mid tahay kuwa kale ee ciidamada Maraykanka. Laakiin kala duwanaanshuhu wuxuu ku yimaadaa khataraha iyo fursadaha lacag-bixinta (iyo horumarinta) ee aad heli doonto markaad ka gudubto tababbarka aasaasiga ah ee murugada leh ee shaqaaleysiinta cusub.
Mushahar dheeraad ah oo suurtogal ah ayaa ka imanaya hawl -gelinta, boodhka baarashuudka, iyo safaro shaqo oo soo noqnoqda.
Laanta ayaa sidoo kale bixisa faa'iidooyin aad u deeqsi ah oo ay ku jiraan gunnooyinka kirada guriga iyo 30 maalmood ee PTO.
Tani waa laan kale oo militariga ugu mushaarka badan adduunka.
7) Ciidanka Jarmalka-
Haddii aad ku biirto ciidanka Jarmalka, waxaad u badan tahay inaad eegto faa'iidooyinka la socda. Haa, mushaarka saldhiggu waa hufan yahay, laakiin kaabayaasha baaxadda leh iyo barnaamijyada bulshada ayaa ah sawirrada runta ah.
Waxyaabaha ugu wanaagsan ee barnaamijka mushaharka iyo faa'iidooyinka Ciidanka Jarmalka waxaa ka mid ah barnaamijkiisa hawlgabka ee deeqsinimada leh oo la socda dhalashada Jarmalka oo hubiya hawlgab ammaan ah oo sharaf leh.
6) Legion Dibadda Faransiiska-
Haddii aad raadsato xoogaa khibrad caalami ah inta aad si sax ah lacag ugu siineyso dadaalladaada, markaa Legion Foreign French ayaa kugu habboon.
In kasta oo mushaarka aasaasiga ah ee bilowga ah uu aad u hooseeyo, rafcaanka ayaa si weyn u boodboodaya marka aad tixgelinayso mushaharka weyn ee mushaharka haddii aad ka hawlgasho dibedda la -hawlgalka Faransiiska Dibadda Legion (in ka badan $ 4,000 US bishii).
Haddii aad aragtid adduunku wuxuu ku jiraa kaararka xirfaddaada, markaa kani waa laanta aad ku biiri karto oo aad jeebkaaga gashan karto.
Waxay ka mid yihiin ciidamada ugu mushaarka badan.
5) Ciidanka Cirka Mareykanka-
In kasta oo mushaharka aasaasiga ah ee bilowga ah, haddii aad ku biirto USAF, ay isku mid yihiin laan kasta oo Mareykanka ah. Mushaharku waa qiyaastii $ 20,000 sanadkii.
Mushaharkan oo aad u hooseeya waxaa iska leh faa'iidooyin aad u fara badan, oo ay ku jiraan gunnooyinka kirada guriga, deeqaha waxbarashada, iyo mushahar bixinta.
Tani waxay run u tahay laan kasta oo ka tirsan milatariga Mareykanka, laakiin dabeecadda gaarka ah ee USAF waxay u oggolaaneysaa qolka ugu ballaaran ee koritaanka xagga magdhowga.
Dusha sare saar taas oo aad hawlgab ku noqon karto 20 sano tanina waa hubaal waddo aad mari karto taasoo kaa fogeyn doonta inaad waxyeello u geysato marka loo eego laamaha kale.
Waa mong laanta militariga ee ugu mushaarka badan.
4) Ciidanka Cirka ee Royal New Zealand-
Haddii aad maareyn karto inaad ka gudubto heerarka adag, markaa tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah heesaha milatari ee 'ugu raaxeysan' ee aad ka degi karto meel kasta oo adduunka ah.
Qaddarka mushaharka saldhiggu aad buu u sarreeyaa, qiyaastii $ 34,000 US sannadkii, wuxuuna bixiyaa faa'iidooyin ay ka mid yihiin daryeelka carruurta, fasax mushahar leh, iyo deeqo waxbarasho.
Intaa waxaa sii dheer, waxaad ku qaadan doontaa inaad ku qarashgareyso meheraddaada adoo ku dhejinaya muuqaalada muuqaalka ah ee New Zealand. Marka, haddii aad maamuli karto, u duusho door ka mid ah Ciidanka Cirka ee Royal New Zealand.
3) Ciidanka Ingiriiska-
Ciidanka Biritishku wuxuu leeyahay mid ka mid ah hababka aasaasiga ah ee dhammaystiran ee magdhowga iyo faa'iidooyinka uu qofku ku biiri karo.
Mushaarka aasaasiga ah ee qorista ciidanka waa qiyaastii $ 28,000 USD sanadkii. Laakiin sidoo kale waxaa ku jira faa'iidooyin aad u fara badan oo ay ka mid yihiin bixinta xaaladaha halista ah iyo miisaanka mushaharka oo horumarsan.
Tani waxay suurtogal tahay oo kaliya haddii aad khawano karto shuruudaha adag ee loo baahan yahay si aad ugu gudubto darajooyinka askariga boqoradda Ingiriiska.
Waa mid ka mid ah laanta militariga ee ugu mushaarka badan.
2) Ciidamada Qalabka Sida ee Canada (CAF)-
Dalladan milatariga Kanada waxay siisaa mushahar aasaasi ah oo aad u fiican kuwa cusub ee la qorayo aag kasta oo aad ku biirto.
Shaqaale ahaan, waxaad kasbataa ku dhawaad ​​$ 30,000 US mushaarkaasina wuxuu noqon karaa mid aad u sarreeya.
Sababta kaliya ee laanta milatarigu aysan ugu jirin meeshayada kowaad waxaa ugu wacan yaraanta faa'iidooyinka guud (in kasta oo daryeelka caafimaadka iyo gunnooyinka, dhab ahaan kaa maqnaan doontid haddii aad ku biirto safka CAF) marka la barbar dhigo meesha ugu saraysa.
Waa mid ka mid ah ciidamada labaad ee ugu mushaarka badan.
1) Ciidanka Difaaca Australia-
Laantan hoos ka hooseysa waxay ku faantaa meel u dhow caddadka ugu sarreeya ee Dhulka. Laakiin runtii waxay qaadataa booska ugu sarreeya maaddaama faa'iidooyinka iyo gunnada gunnadu ay ka gudbaan laamihii kale ee milatariga adduunka.
Intaa waxaa dheer, mushaarka saldhigga ah qiyaastii $ 30,000 oo doolarka Mareykanka ah, ADF waxay kaloo bixisaa gunnooyin iyo faa'iidooyin (oo ay ku jiraan gunnooyinka guryaha iyo yunifoomka) taas oo ka dhigaysa dhammaadka mushaharka ku dhowaad labanlaab tiradaas shaqaalaysiinta heerka gelitaanka.
Mushaharka guud iyo faa'iidooyinka, si fudud uma samayn kartid wax ka fiican ADF.
Kani waa laanta ciidanka ugu mushaarka badan.
Halkaas waxaad tagtaa, 10 ka mid ah laamaha militariga ee ugu mushaarka badan adduunka. Haddii aad tahay muwaadin u dhashay mid ka mid ah dalalkan oo aad hadda hareeraha ka raadineyso shaqo aan ku caajisayn laakiin sidoo kale ku qori doonta koontadaada bangiga xun, ku -biiridda safka ayaa ah habka ugu fiican.
Waxaan rabnaa inaan ogaano laanta aad jeceshahay inaad ku biirto ugu badan iyo sababta. Miyaad doonaysaa inaad qaadato lacagta iyo mushaharka aasaasiga ah mise waxaad doorbideysaa xidhmada faa'iidooyinka ka fiican?
Miyaad rabtaa sharafta laanta sida US Marine Corps, mise waxaad doorbidi lahayd xirfad aamusnaan ah oo ku taal laan aan ku lug lahayn baaxad caalami ah sida Ciidanka Cirka ee Royal New Zealand?
Miyaad doorbideysaa awoodda baaxadda leh ee laanta ugu awoodda badan adduunka- Ciidanka Badda Mareykanka? Ma jiraan laamo aad u malaynayso in laga dhuftay tobankayadii ugu sareeyey? Noo sheeg waxa aad ka qabto qaybta faallooyinka ee hoose.
Badbaadadu waa mid ka mid ah jagooyinka ugu muhiimsan kubbadda cagta maxaa yeelay waxay hubisaa in dambiga uusan…
15 Tiknooloojiyadda Qalliinka ee ugu Lacag Badan | Gobolka ugu Fiican
Ma jeclaan lahayd inaad ka shaqeyso deegaanka isbitaalka? Ma jeceshahay urta qalabka isbitaalka? Mise waad la dhacsan tahay…